मतदाता परिचय पत्र पाउनु भएन ? तेसो भए यस्तो गर्नुस ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मतदाता परिचय पत्र पाउनु भएन ? तेसो भए यस्तो गर्नुस !
दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने तीन प्रदेशमा भोलि मतदान हुँदैछ । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ६४ लाख ३२ हजार ७६५ मतदाताले मतदान गर्नेछन् ।
निर्वाचन आयोगले आज पनि मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ । तर, मतदाता नामावलीमा नाम भएको तर, मतदाता परिचय पत्रले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्रका अतिरिक्त अन्य सरकारी कागजातलाई पनि मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । ‘मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले कुनै कारणवशः मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्राप्त गरेका मतदाताले परिचयपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा निजको मताधिकार सुनिश्चित गर्न यो निर्णय लिएको हो’ आयोगले भनेको छ ।
यस्तै राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइलेन्स), जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएको परिचयपत्र देखाएर पनि मतदान गर्न पाइनेछ ।
साथै मतदाता नामावली तथा मतदाता परिचयपत्रमा सामान्य त्रुटि पाइएमा सानोतिनो भूलचुक मान्ने र नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरणलाई मूल आधार लिई मतदान गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रको पहुँच, विगतमा भएका घटना र भौगोलिक विकटताको आधारमा जिल्लामा तीन समूहमा वर्गीकरण गरी शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधलीरहित तथा मर्यादित बनाउन निर्वाचनमा भाग लिएका जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतसहितका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्वाचन सामग्रीसहित कार्यक्षेत्रमा पठाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी रमेश जोशीले जानकारी दिनुभयो । मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई निर्वाचनसम्बन्धी तालिम दिएर तोकिएको कार्य क्षेत्रमा पठाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “वैशाख ३० गते हुने निर्वाचन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।”
निर्वाचन सफल पार्न जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दललाई अमर्यादित गतिविधि नगर्न अनुरोध गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो । जिल्लामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र जसपाले सुरुङ्गा नगरपालिकामा र माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले खडक नगरपालिकामा चुनावी तालमेल गरेका छन् । अन्य सत्तासिन नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), लोसपा र जनमत एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ ।
वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा चार लाख १२ हजार ४४५ ले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । महिला एक लाख ९८ हजार ५३२, पुरुष दुई लाख १३ हजार ८९२ र २१ अन्य मतदाताले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीका अधिकारी जोशीले बताउनुभयो । विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पाँच/पाँच, एमालेले दुई र नयाँ शक्ति पार्टीले एक स्थानीय तहमा विजयी हासिल गरेको थियो ।